Haweeneyda la dhalatay Hoggaamiayha Kuuriyada Waqooyi oo kamid noqotay dadka dejiya siyaasadda Waddankaas | Wakaaladda Wararka Qaranka Soomaaliyeed
Haweeneyda la dhalatay Hoggaamiayha Kuuriyada Waqooyi oo kamid noqotay dadka dejiya siyaasadda Waddankaas
Gabadha la dhalatay hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un, ayaa door muhiim ah ka qaadaneysa olole cusub oo ka dhan ah dalka kuuriyada koonfureed, taasoo dadka wax odorosa ay ku sheegeen in door siyaasadeed oo wax ku ool ah ay ku caawineyso walaalkeed.
Haweeneydaan oo la aaminsanyahay in ay jirto 30 sanno Kim Yo Jong ayaa ah qofka kaliya ee qoyskiisa ugu dhaw hoggaamiayha kuuriyada waqooyi ee ka ciyaareysa siyaasadda door muuqda.
Intii lagu guda jiray sanadihii 2018-2019 duulaankii diblomaasiyadeed ee caalamiga ahaa, ayaa Kim Yo Jong waxey indhaha caalamka ku soo jeedisay wafdi ay hoggaamineyso oo tagay ciyaarihii Olombikada xagaaga ee lagu qabtay dalka Koofurta Kuuriya.
Waqti dambe ayaa haddana waxaa la arkay iyadoo hubineysa waxa u hagaagay walaalkeed ka weyn oo ku sugan goob tareen oo uu kula kulmayay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo ku taalla dalka Vietnam.
Bishii Maarso, warbaahinta dowladda ayaa markii ugu horreysay waxey baahisay hadallo dhaleeceyn ah oo kasoo baxay haweeneyda la dhalatay hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi oo ay ku weerareyso masuliyiinta Kuuriyada Koofureed, kaddib waxaa xigay tallbaabooyin ay ugu jawaabeyso hadallo ka yimid Madaxweyne Trump, toddobaadkii ugu dambeeyana waxey ka digtay in dalkeeda uu u jari doono xiriirka uu la leeyahay dalka ay deriska yihiin ee Kuuriyada Koofureed.
Ms Kim, ayaa sidoo kale ka mid ah shaqsiyaadka ku jira liiska cunaqabataynta Mareykanka, waxaana lagu eedeeyay tacadiyo dhanka xuquuqda aadanaha ah oo ka dhacay Kuuriyada Waqooyi.
Previous articleAMISOM oo qiratay dilka dad rayida
Next articleMadaxweyne Lafta-Gareen oo booqday ciidamo u dhaawacmay Difaaca dalka +sawirro